Amathrendi angu-7 avela ku-Semalt Ukuqeda ukukhangiswa kwe-SEO ngo-2017
I-SEO, yamabhizinisi amaningi, ibasiza ukuba bahlale phambili emncintiswaneni wabo.Ukuqonda izinguquko ku-SEO kuyadingeka ukuze kulungiswe okuqukethwe kwabo kanye ne-SEO isu ukuze zifinyelele emncintiswaneni.
uJason Adler,iMenenja yokuPhumelela kweKlayenti ehola phambili i-Semalt Izinsizakalo Zedivaysi, ichaza izimo ze-SEO ezibusayo zika-2017:
1. Ukuphakama kwamaSelula omfutho we-Mobile (AMPs).
Ama-AMP ayimilayezo evulekile-yomthombo ekhuphula ukulayisha ikhasi ekhasini kumadivayisi eselula - buy high quality passports usa.Banda ijubane ngezikhathi ezine futhi banciphise izindleko zedatha ngezikhathi eziyisishiyagalombili. I-Google inithanda izingosi ezilungiselelwe isakhiwo sabo ukusekelaAma-AMP. Isithonjana esincane, esine-carousel nesibani sombane, sibonise isimo se-AMP sesayithi. Ngenxa yalolu daba, iIsenzo esilindelwe ngamaningi amaningi ukusizakala.
2. Ukuphakama kokuqukethwe "okunamandla".
Abantu njengamanje bayathanda okuqukethwe okude okuhlanganisa isihloko ngokubanzi njengobauma kuqhathaniswa nokuqukethwe okulumayo okusetshenziswe ngokuphindaphindiwe esikhathini esidlule. Njengoba lezi zinhlobo zombili zikhukhumele emakethe, ukugxila kungase kudluleleukungazinaki ubude ngokuphelele futhi ugxile ekuhlinzekeni okuningi okuqukethwe esikhaleni esincane kunazo zonke ukuphikisa abafundi, into ethileokuthiwa "okunamandla" okuqukethwe.
3. Ukufunda Umshini Kuzoshintsha Indlela I-algorithms isebenza ngayo.
I-Google RankBrain ivule iminyango yokufaka amathuba okufunda.Isandiso semisebenzi ye-Google Hummingbird ihlaziya imishwana esetshenziselwa abasebenzisi kumbuzo okuxoxisana kanye nezibuyekezo zokulungiswa ngokufanele..Abantu balindele ukuthi i-Google izokhipha izibuyekezo eziningi zokufunda futhi zifake kwezinye izindawo ezifana nokuhunyushwa kwedatha nomaukumaketha okuzenzakalelayo.
4. Ukukhwabanisa komuntu siqu njenge-Secret SEO Weapon.
Kuyoba lula kumabhizinisi ukuvikela izikhala zokuvakasha, ukwakhaukwethemba, futhi ushayela ngaphezulu kwe-traffic kuwebhusayithi. I-Semalt ihlanganisile ngempumelelo ukufaka uphawu lomuntu siqu kumkhankaso wokumaketha. NjengobaAmapulatifomu ezokuxhumana nabantu aqhubeka nokuvumela okuthunyelwe ngabanye ngaphezulu kokuthunyelwe kwe-branded, izinkampani eziningi zizoqhubeka zithola inaniukufaka uphawu lomuntu siqu okuholela ekutheni kube namathuba amaningi nokwanda komncintiswano.
5. Ukusebenza kobuchwepheshe bomsebenzisi (UEO).
Okuhlangenwe nakho komsebenzisi kubalulekile ku-SEO. I-Google iyakuthanda ukulungiswa kweselulaamasayithi amadivayisi eselula. Isivinini nesipiliyoni somsebenzisi esithokozelayo sichaza izici zesayithi elithuthukisiwe leselula. Unyaka2017 ingagcizelela kakhulu ulwazi lomsebenzisi. I-AMP iyisignali yokuqala yalokhu, kodwa ifuna ezinye izindlela ezizibandakanya kuzoukusizwa komsebenzisi kuphakanyiswa.
6. Ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza zeselula.
I-SEO inyuse izinketho zohlelo lokusebenza lweselula kubasebenzisi abanezici ezinjalonjengohlelo lokusebenza lwe-indexing, ukuxhuma okujulile ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza, nokusakaza uhlelo lokusebenza. Kuze kube manje, i-Google ikwazi ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi bezinhlelo zokusebenzangaphandle kokushiya injini yayo yokusesha njengenjini yokusesha. Izinhlelo zokusebenza zingashintsha kabusha amawebhsayithi wendabuko futhi zandise ukuthanda uhlelo lokusebenza.
7. Ukufinyeleleka kwabasizi be-Personal Digital.
Ngo-2017, ukuhlukahluka nokuthuthukiswa kokuthuthuka kwe-digital digitalizici zabasizi ezifana no-Siri no-Cortana lezi zici zizoletha amafomu amasha nakwephambili okusesho lokuxoxaimibuzo eveza amathuba okubeka amabhizinisi ezindaweni zombili.
Asikho isidingo esincane sokushintsha amasu wamanje wokuthengisa, kodwakubalulekile ukuqaphela imiphumela engase ibe nalezi zindlela ezingaba nazo ebhizinisini. Lokhu kuqwashisa kuzosiza ukuthuthukisa iuhlelo lokuhlelwa kokulondoloza isikhundla esiphezulu kunabanye abaphikisi.